Al-shabaab oo weerar ku soo qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku lahaayeen degmada Afgooye – Radio Daljir
Al-shabaab oo weerar ku soo qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku lahaayeen degmada Afgooye
Agoosto 31, 2018 10:27 b 1
Wararka naga so gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in dagaal culus uu ku Dhexmaray degmada Af-gooye “Al-shabaab oo dhinac ah “ciidamada dowladda” iyo kuwa AMISOM.
Dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay .
Al-shabaab ayaa Warbaahintooda ku soo qoray in dagaalkan ay ku dileen 5 Askari oo katirsan ciidamada dowladda Fadaraalka Soomaaliya “waxayna sheegeen in saacado koban ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada .
Ciidamada dowladda ayaa haatan dib ula wareegay gacan ku haynta degmada Af-gooye “waxaana haatan dagan Xaalada magaalada .
Dadka deegaanka ayaa waxa ay cabsi xoogan ay ka muujinayaan in dagaalku uu noqdo mid soo laa laabta .
Isimada Soomaaliland oo sheegay in Cadaalad daro ay jirto ( dhagayso )